Ahoana ny fananganana Xbox amin'ny alàlan'ny telefaona aka.ms/xboxsetup? - Lalao
Na eo aza ny hatsarany rehetra, ny manavao ny firmware an'ny Xbox anao dia mety ho lahasa goavambe. Raha tsy mahay mampiasany fampiharana nomerika ary ampifanaraho amin'ny fananganana Xbox anao, mety ho lany daty ianao. Ankoatr'izay, mety hipetraka eo amin'ny efijery mandrakizay ianao.
Amin'ity lahatsoratra ity dia hianaranao ny zava-drehetra momba ny fampiharana dizitaly ao amin'ny Xbox sy ny fomba mahasoa anao. Hanasongadinana ny fahadisoana sy hadisoana iraisana vitsivitsy hialana olana ny lahatsoratra. Noho izany, andao hanomboka!
Inona no atao hoe aka.ms/xboxsetup?
Mety ho fantatrao tsara fa misy fampiharana Xbox ofisialy ho an'ny finday avo lenta. Izy io dia miasa amin'ny sehatra Android sy iPhone amin'ny fomba tsara indrindra.Ny fampiharana Xbox dia misy endrika sy fialamboly marobe. Na izany aza, mila anao manana ny kaody fanamboarana ianao mba hidiranao ao amin'ny smartphone manontolo. Raha misintona ny fampiharana ho an'ny finday avo lenta ianao dia hiseho ho anao ilay kaody. Zava-dehibe ny manamarika ity kaody ity.
Ny tranokala nomena etsy ambony dia vavahady ahafahana manangana ny fampiharana Xbox anao ary mampifandray izany amin'ny konsolanao nomerika. Izy io koa dia miasa ho toy ny safidy amin'ny tanana ho anao hanavao ny Xbox ary hametraka ny firmware farany. Noho izany, rehefa manomboka manangana ny Xbox ianao dia hampiseho aminao ilay kaody miaraka amin'ilay rohy.
Na izany aza, tsy manazava amin'ireo mpampiasa izany fa mila manamarika ity kaody ity izy ireo satria tsy maintsy hampiasa azy io avy eo. Ny ankamaroan'ny olona dia mampiasa ny scanner QR code na ny rohy, mieritreritra fa hanome azy ireo fidirana. Vokatr'izany? Vantany vao vita ny fametrahana ny app dia mangataka kaody mitovy aminy izy. Ankehitriny, raha tsy voamarikao izany dia tsy misy fomba ahafahanao mamerina azy io. Sa misy?
Ahoana no ahafahanao mamerina ilay kaody?
Ny fomba azo antoka azo antoka indrindra hahazoana ny kaody dia amin'ny alàlan'ny fanesorana ny fampiharana amin'ny telefaoninao ary hamerenana ny laoniny ny fizotrany fametrahana. Azo inoana fa hasehony anao indray ilay kaody nomarihinao. Aza averin'ny orinasa ny Xbox. Izany dia hitarika anao hamoy ny angon-drakitra ilaina rehetra, ary mety hijanona havaozina hatrany ny firmware.
Ahoana raha tsy mandeha ny fametrahana indray?
Avy eo ny fanantenanao farany dia ny hifandray amin'ny fanohanan'ny mpanjifa. Na dia mety amin'ny ankamaroan'ny fotoana aza ny vahaolana voalaza etsy ambony, dia ho afaka hiditra amin'ny fampiharana mahomby ianao. Ie, takatra fa ny Xbox dia tokony manazava tsara kokoa ireo torolàlana fananganana ireo.
Ahoana ny fananganana Xbox amin'ny app-nao?
Dingana tsy misy tohika izany, fa indraindray mety diso hevitra ianao hoe inona no hatao voalohany. Ity misy torolàlana iray izay mitazona ny fizotrany mora ny fizotrany:
Voalohany, tsy maintsy mahazo ny kaody novakianao momba izany ianao. Ho an'izany, mila mitsidika ny tranonkala ianao, aka.ms/xboxsetup . Raha tsy izany, azonao atao ny mampiasa ny scanner code QR amin'ny efijery fananganana Xbox hidirana amin'ilay tranonkala.
Hahazo ilay kaody amin'ny findainao ianao. Mariho izany, ary avy eo mandehana any amin'ny fivarotana na tranokala ofisialy ampidino ny app Xbox . Hamarino tsara fa ambany ity kaody ity.
Vantany vao tafapetraka eo amin'ny fitaovana ilay fampiharana dia alefaso ary tohizo ny fanamboarana. Midira miaraka amin'ny ID Xbox ofisialinao. Hangataka anao izy hampiditra ny kaody. Raha nanamarika izany ianao dia tokony ho tsio-drivotra ity.
Ankehitriny dia hanontany anao fanontaniana roa ianao ho an'ny safidinao sy ny fananganana. Araho.
Raha vantany vao tafapetraka ny Xbox anao, dia hangataka anao hampihatra fanovana amin'ny fampiharana ianao. Hamafiso izany, ary hampiasa ny fampiharana miaraka amin'ny console Xbox anao ianao.
Maninona ianao no tokony hametraka sy handrindra ny fampiharana nomerika anao amin'ny Console?
Misy endri-javatra tsy manam-paharoa sy mora ny fidirana amin'ny rindrambaiko Xbox ofisialy. Io dia ahafahanao mifandray amin'ireo namanao sy ny fiarahamonina. Azonao atao ny manara-maso ny lalao sy mahazo ny fampahalalana ilaina rehetra. Mitovy amin'ny foibe in-built Xbox, azonao atao ny mampiasa safidy toa ny fividianana lalao sy ny toy izany. Amin'ny ankapobeny, dia toy ny sehatra rahona ho an'ny console Xbox anao izay mifandray amin'ny finday avo lenta ho mora.
Inona no azonao atao amin'ny Xbox App?
Azonao atao ny mifehy ny console Xbox fa tsy mila ny mpanara-maso. Izy io dia ahafahanao mivezivezy amin'ny console na mampiasa ny teny fanalahidy sy ireo fiasa mitovy amin'izany amin'ny alàlan'ny findainao. Noho izany, manary ny filàna fanaraha-maso console mandany fotoana izy io.
Ilay rindrambaiko koa dia miaraka amina mpanara-maso ny haino aman-jery izay mitondra anao amina karazany marobe toy ny fandraketana horonan-tsary, pikantsary ary maro hafa. Amin'ny fomba hafa, azonao atao ny mampiasa ny fampiharana hilalaovana na hiatoana ilay lalao. Satria manohana ny fampiharana hafa i Xbox izao, indrindra ny streaming toa an'i Netflix, azonao atao ny miditra amin'ny alàlan'ny findainao ary manomboka azy eo amin'ny efijery lehibe.
Tamin'ny voalohany, dia toy ny manana fanaraha-maso lavitra ho an'ny Xbox anao izay manavaka azy amin'ny mpanara-maso ny lalao.
Fanaraha-maso ny haino aman-jery:
Azonao atao ny maka sary, nakana sary, ary tahirizo ireto clip ireto. Tsy mila anao mankany amin'ny console hampavitrika ilay fisehoana. Raha manana fipoahana amin'ny filalaovana lalao ianao amin'izao fotoana izao, dia afaka mampiasa haingana ny rindrambaiko finday avo lenta hanombohana ny fandraisam-peo.
Mitovy amin'ny Xbox PaaS sy gaming cloud, azonao atao ny mividy ny lalao amin'ny console anao amin'ny alàlan'ny app an'ny telefaona. Noho izany, tsy mila miditra amin'ny console lalao 24/7 ianao hahazoana ny lalao. Raha any am-pianarana ianao, na miasa, na mandeha, dia mbola azonao atao ny manara-maso ireo fifanarahana sy lalao hovidiana.
LFG sy Live Club:
Mahazo vondrona mitady tarika vondrona Xbox sy Xbox Live ahafahanao mifanerasera amin'ireo mpilalao sy mpampiasa hafa amin'ny fampiharana Xbox. Ankoatr'izay, afaka mifandray sy milalao miaraka amin'ireo mpilalao amin'ny fomba mety ao amin'ny console Xbox ianao. Ny fampiharana dia tsy misy ny fisehony amin'ny fifandraisana. Ny endri-pandefasan-kafatra iray dia ahafahanao mitarika hafatra (na manokana) olona hifandraisana amin'izy ireo.
Antenaina fa ity torolàlana ity dia manamora ny fanarahan-dia anao amin'ny fizotran'ny fametrahana ary hampiato ny fampiharana nomerika. Aza adino, ny tanjona dia ny manavao ny Xbox amin'ny tanana ary manangana azy amin'ny app digital anao. Ity torolàlana ity dia mety ho zava-dehibe amin'ny console taloha kokoa satria ny Xbox dia mitondra anao hatrany hilalao amin'ny alàlan'ny fampiasana console rehetra sy mifanentana tanteraka amin'ny fampiharana, na dia ho an'ireo consoles taloha sy vaovao aza. Mifalia sy mankafiza kilalao tsy misy kilema!
PS5 vs Xbox Series X - Iza no tsara indrindra?
Inona no fantatrao momba ny The Forever Purge?
Fantatro izay nataonao tamin'ny fahavaratra lasa ho avy tsy ho ela
inona ny fampiharana mozika maimaimpoana tsara ho an'ny android
ahoana ny fomba fampidinana hira avy amin'ny youtube mankany mp3
streaming tv sy sarimihetsika an-tserasera
lalao android ho an'ny Windows 10
manaova zavatra mety amin'ny mpametaka sarimihetsika feno